Galaxy S10 vs Galaxy S20 Ma u qalantaa isbedelka? | Androidsis
Qolka Ignatius | | Aaladaha Android, Samsung
Markii la soo saaray Samsung Galaxy S20, isticmaaleyaal badan ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan dib u habeynta hore ee Galaxy S10. Maaddaama aad awood u yeelatay inaad ka akhrisato qodobbada kala duwan ee aan ku daabacnay dhammaan macluumaadka la xiriira Galaxy S20, isbedelada waa gudaha oo si gaar ah ula xidhiidha kaamerada.
Haddii kamaradu ay tahay mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan adiga, maahan inaad sii wadato aqrinta maqaalka, maxaa yeelay isbeddelada ay qaybtani heshay waa kuwo aad u cajaa'ib badan, oo aan la oran karin, inkasta oo aynaan weli helin fursad u helno falanqeyn faahfaahsan, laakiin wax walba waxay muujinayaan inay noqon doonto tan ugu fiican suuqa.
Nooca ugu cusub ee bilicsanaanta ee saameynaya dhammaan moodooyinka cusub ee la soo bandhigay, waxaan ka helnaa, marka lagu daro qaybta sawir qaadista, xaaladda kamarad hore, kaasoo ka socda geeska midig ee kore ilaa xarunta sare. Inta kale ee naqshadeynta ficil ahaan waa isku mid, marka waa inaan diiradda saarnaa gudaha.
1 Isbarbar dhigga Galaxy S20 vs Galaxy S10e
2 Isbarbardhiga Galaxy S20 + vs Galaxy S10
3 Miiska isbarbardhiga ee Galaxy S20 Ultra vs Galaxy S10 +
4 Galaxy S10 wuxuu yareeyaa qiimaha
5 Qiimaha kala duwan ee Galaxy S20
6 Ma u qalantaa isbedelka?
Isbarbar dhigga Galaxy S20 vs Galaxy S10e
Screen 6.2-inch Dynamic AMOLED AMOLED firfircoon 5.8 inji
Gacaliye Snapdragon 865 / Exynos 990 Snapdragon 855 / Exynos 9820
Xusuusta RAM 8 / 12 GB 6 GB
Kaydinta Gudaha 128GB UFS 3.0 128GB UFS 3.0
Cámara trasera 12 mpx weyn / 64 mpx telephoto / 12 mpx xagal ballaadhan 12MP / 16MP
Kaamirada hore 10 mpx 10 mpx
Nidaamka hawlgalka Android 10 oo leh One UI 2.0 La cusbooneysiiyay Android 10 oo leh One UI 2.0
Batariga 4.000 mAh - waxay taageertaa lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka 3.100 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 - Wifi 6 - USB-C Bluetooth 5.0 - Wifi 6 - USB-C
Sannadkan Samsung waxay bedeshay istiraatiijiyaddeeda waxayna dooratay inay tirtirto SXe, oo ah nooc ka soo muuqday sanadkii hore oo ah nooc soo-gal ah oo ku socda S range (oo u qalma dib u dhigista). Ma garanayno sababta loo baajiyay, laakiin waxay u badan tahay in suuqu uusan sifiican uga jawaabin ama ay la socotoNooca S10 Lite iyo Note 10 Lite wuxuu doonayaa inuu daboolo qaybtaas suuqa.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Galaxy S20 iyo Galaxy S10e ayaa ah cabirka shaashadda, halka jiilkii hore uu ahaa 5,8 inji, sannadkan wuxuu gaadhay 6.2 inji. Labaduba waxay wadaagaan isla shaashadda shaashadda iyo teknolojiyad isku mid ah, Dynamic AMOLED. Cusbooneysiin muhiim ah oo la socota S20 dhammaan noocyadeeda waa 120 Hz bandhig.
Farqiga kale waxaa laga helaa xusuusta, waxaan ka soo gudubnay 6 GB oo RAM ah oo S10e ah ilaa 8 iyo 12 GB oo ah Galaxy S20 noocyada 4G iyo 5G siday u kala horreeyaan. Qeybta sawirada, waxaan sidoo kale kaheleynaa sheeko heer sare ah muraayadaha telephoto, muraayadaha telephoto ee gaara 64 mpx oo aan kajirin S10e.
Maaddaama cabirka shaashadu korodhay, baytarigu sidoo kale wuu koray, ka socda 3.100 mAh oo aad u yar una socota 4.000 mAh ee Galaxy S20. Processor-ku wuxuu raacay isbeddelka caadiga ah, isagoo ka socda Snapdragon 855 illaa Snapdragon 865 iyo Exynos 9820 illaa Exynos 990 ee sannadkan.
Isbarbardhiga Galaxy S20 + vs Galaxy S10
Screen 6.7-inch Dynamic AMOLED 6.1-inch Dynamic AMOLED
Xusuusta RAM 8 / 12 GB 8 GB
Kaydinta Gudaha 128-512GB UFS 3.0 128GB UFS 3.0
Cámara trasera 12 mpx ugu weyn / 64 mpx telephoto / 12 mpx xagal ballaadhan / dareeraha TOF 12 mpx weyn / 12 mpx telephoto / 16 mpx ultra wide
Kaamirada hore 10 mpx 10mpx
Batariga 4.500 mAh - waxay taageertaa lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka 3.400 mAh - waxay taageertaa lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka
Cabbirka shaashadda ee Galaxy S20 + ayaa sii kordhaya marka loo eego S10, laga bilaabo 6,1 inji oo ah S10 illaa 6,7 inji oo ku yaal S20. Tikniyoolajiyadda shaashadu waa isku mid, Dynamic AMOLED iyo sidoo kale xallinta. Cusbooneysiin muhiim ah oo la socota S20 dhammaan noocyadeeda waa 120 Hz bandhig.
Xusuusta waxaa lagu hayaa 8 GB oo RAM ah oo ku jira Galaxy S20, laakiin waxaa lagu kordhiyay 12 GB qaabka 5G, waana sheeko muhiim ah oo ay ugu wacan tahay farqiga dhaqaale ee yar, qaabka 5G ayaa ka guul badan qaabka 4G. Qeybta sawirka, telephoto-ka wuxuu ka socdaa 12 mpx ee S10 ilaa 64 GB ee S20, marka lagu daro ku darista a Qalabka TOF si loo cabbiro qoto dheer oo duurka
Kordhinta cabirka shaashadda waxay la xiriirtaa kororka batteriga, kaasoo ka socda 3.400 mAh oo ku jira S10 ilaa 4.500 mAh oo ku jira S20 +. Marka la eego waxqabadka, processor-ku wuxuu raacay isbeddelka caadiga ah, isagoo ka socda Snapdragon 855 ilaa Snapdragon 865 iyo Exynos 9820 ilaa Exynos 990 sanadkaan.
Miiska isbarbardhiga ee Galaxy S20 Ultra vs Galaxy S10 +
Screen 6.9-inch Dynamic AMOLED 6.4-inch Dynamic AMOLED
Xusuusta RAM 16 GB 8 / 12 GB
Kaydinta Gudaha 128-512GB UFS 3.0 128GB-512GB-1TB UFS 3.0
Cámara trasera 108 mpx ugu weyn / 48 mpx telephoto / 12 mpx xagal ballaadhan / dareeraha TOF 12 mpx weyn / 12 mpx telephoto / 16 mpx ultra wide
Kaamirada hore 40 mpx 10 mpx iyo 8 mpx
Batariga 5.000 mAh - waxay taageertaa lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka 4.100 mAh - waxay taageertaa lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka
Cabbirka shaashadda ee Galaxy S20 Ultra ayaa sii kordhaya marka loo eego S10 +, wuxuu ka socdaa 6,4 inji oo ah S10 + illaa 6,9 inji oo ah S20 Ultra. Tikniyoolajiyada shaashadu waa isku mid, Firfircoon AMOLED sida qaraarka oo kale. Cusbooneysiin muhiim ah oo la socota S20 dhammaan noocyadeeda waa 120 Hz bandhig.
Galaxy S20 Ultra waxaa kaliya lagu heli karaa nooca 5G, marka sida S20 + oo kale, xusuusta ayaa ka saraysa oo gaareysa 16 GB. Soojiidashada ugu weyn ee S20 Ultra waxay ku jirtaa kamaradda, kamarad kamaraddeeda ugu weyn ay gaarto 108 mpx, dareeraha ugu weyn oo uu weheliyo t48 mpx sawir leh 10x zoom optical iyo 100x hybrid. Waxaan sidoo kale helnaa aaladda 'TOF sensor' 12 mpx sensor sensor-xagal ballaadhan.
Kordhinta cabirka shaashadda waxay la xiriirtaa kororka batteriga, kaas oo ah pgacanta ka qaado 4.100 mAh ee S10 + ilaa 5.000 mAh ee S20 Ultra. Marka la eego waxqabadka, processor-ku wuxuu raacay isbeddelka caadiga ah, isagoo ka socda Snapdragon 855 illaa Snapdragon 865 iyo Exynos 9820 illaa Exynos 990 ee sanadkan.
Galaxy S10 wuxuu yareeyaa qiimaha
Markii la soo saaray Galaxy S20, Samsung waxay qaadatay fursad ay ku rhoos u dhig qiimaha S10. Qiimaha rasmiga ah ee hadda jira 'Galaxy S10'
Qiimaha Samsung Galaxy S10e
Galaxy S10e waxaa lagu heli karaa oo keliya Madoow 759 euro iyo 128 GB oo keyd ah.
Qiimaha Samsung Galaxy S10
Galaxy S10 waxaa loo heli karaa 759 euro oo cadaan, cagaar iyo madow isugu jira oo leh 128 GB oo keyd ah.
Samsung Galaxy S10 + qiimaha
Galaxy S10 + wuxuu ka bilaabmaa 859 euro iyadoo la socota 128 GB oo keyd ah, nooca 512 GB wuxuu gaarayaa 999 euro halka midka 1 TB-ga uu yahay 1.609 euro.
Kuwani waa qiimaha rasmiga ah ee aan ka heli karno gudaha Shabakada Samsung. Haddii aan ka raadinno Amazon, sida caadiga ah, waxaan heli doonnaa sicirro tartan badan.
Qiimaha kala duwan ee Galaxy S20
Qiimaha Samsung Galaxy S20
4G nooca oo leh 128 GB oo keyd ah halkii 909 euros.
5G nooca oo leh 128 GB oo keyd ah halkii 1.009 euros.
Samsung Galaxy S20 Pro qiimaha
4G nooca oo leh 128 GB oo keyd ah halkii 1.009 euros.
5G nooca oo leh 128 GB oo keyd ah halkii 1.109 euros.
5G nooca oo leh 512 GB oo keyd ah halkii 1.259 euros.
Samsung Galaxy S20 Ultra qiimaha
5G nooca oo leh 128 GB oo keyd ah halkii 1.359 euros.
5G nooca oo leh 512 GB oo keyd ah halkii 1.559 euros
Ma u qalantaa isbedelka?
Labada Galaxy S10 iyo Galaxy S10 + labaduba waa laba terminaal oo cajiib ah oo leh RAM ku filan iyo processor-ku awood badan oo ku filan inuu dhawr sano socdo. Isbeddelada ku saabsan dhinaca sawirku aad ayey muhiim u yihiin, laakiin kuma filna in laga fiirsado cusboonaysiinta S10Ilaa aad had iyo jeer rabto inaad ku raaxaysato moodeelka ugu dambeeyay Samsung iyo sawir qaadistuna waa qaybta ugu muhiimsan ee casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Galaxy S10 vs Galaxy S20 Ma u qalantaa isbedelka?
Waxaan ku dhaaranayaa xusuusta S10 inay ahayd UFS 2.1
GSMA waxay xaqiijineysaa joojinta MWC 2020 Coronavirus darteed